दिगो व्यवसायीको हकहितमा लाग्नेछु : राजु श्रेष्ठ (भिडियो) – Saurahaonline.com
दिगो व्यवसायीको हकहितमा लाग्नेछु : राजु श्रेष्ठ (भिडियो)
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको चुनावी सरगर्मी यतिबेला बढ्दो छ । उवासंघको अध्यक्षमा राजु श्रेष्ठको पनि उम्मेदवारी रहेको छ । श्रेष्ठ होटल व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँ समाजसेवी पनि रहनुभएको छ । विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध हुनुभएका श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :
१) यसअघि तपाइँ कुनकुन संस्थामा आबद्ध हुनभयो ?
म विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएर सामाजिक काममा हिँडिरहेको छु । म उवासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेको छु । म राष्ट्रिय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भएर काम गरिसकेको मान्छे हो । नारायणी कला मन्दिरको पनि म अध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु ।
होटल व्यवसायी संघमा काम गरेको लामो अनुभव छ । दर्जनौँ संघसंस्थामा रहेर काम गरिसकेको हुनाले यस पटक म उवासंघको नेतृत्वमा उठ्ने निर्णय गरेको हुँ ।
२) किन अध्यक्षमा उम्मेदवार दिनुभयो ?
म यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे हो । यस पटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेको हुनाले मेरो जाने ठाउँ त नेतृत्व वा अध्यक्षमा नै हो । म व्यवसायीको हकहितको लागि निरन्तर लडिरहेको छु । हिजो लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयको समस्या समाधानमा मेरो ठूलो भूमिका छ । १६ वर्षदेखि म संघमा आबद्ध छु । सदस्यदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्म आएँ । यो समयमा थुप्रै काम गरेको छु । विगतका कामहरुको मूल्यांकन गरेर व्यवसायीहरुले मलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेका छन् । त्यसकारणले मैले उम्मेदवार दिएको हुँ ।’
३) व्यवसायीहरुले तपाइँलाई नै किन जिताउने ?
विगतमा गरेको कामको मूल्यांकन गरेर मलाई व्यवसायीहरुले जिताउने छन् । म व्यवसायीको हकहितमा हिजोदेखि लागिरहेको छु । म विकासप्रेमी मान्छे हो, नारायणगगढको मेनरोडको समस्या छ । त्यसको लागि म समाधान गर्नेछु । पार्किङको समस्या छ, त्यो समाधान गर्न लाग्नेछु । करहरुको समस्या छ, त्यसको समाधान गर्नेछु । यी यावत् समस्या समाधान गर्न मेरो उम्मेदवारी अध्यक्षमा रहेको छ, मलाई विश्वास छ व्यवसायीहरुले जिताउनेछन् ।
४) व्यवसायीहरुको हकहितमा कसरी लाग्नुहुन्छ ?
व्यवसायीको हकहितमा म लडेर लाग्नेछु । हिजो पनि म लागेकै थिएँ । आज पनि म लाग्नेछु । हिजो पहाडजत्रा समस्या पनि समाधान गर्न म घाम पानी नभनी लागेको हो । सबै व्यवसायीहरुलाई यो कुरा थाहा पनि छ । कुन व्यवसायीलाई कहाँनेर समस्या पर्छ, त्यहाँ म लाग्नेछु । खटिनेछु । समस्याबाट व्यवसायीहरुलाई मुक्त गराउनेछु ।
५) गोलाप्रथा नै किन गरियो ?
व्यवसायीहरुलाई एकत्रित गर्नलाई यो प्रणाली अपनाइएको हो । व्यवसायीहरुलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ, एकत्रित बनाइनुपर्छ । त्यसकारणले पनि यो प्रणाली अपनाइएको हो । यसमा कसैले एकाधिकार गर्न खोजिएको होइन, बलजर्फती पार्न खोजिएको होइन । पूर्वअध्यक्षहरु बसेर व्यवसायीहरुलाई एकीकरण गर्नको लागि यस्तो प्रणाली अपनाइएको हो । सबै व्यवसायीहरुले यसलाई स्वागत गरेका छन् ।